May Nyane: ဆဲဗင်းဇူလိုင် နောက်ဆက်တွဲ
လွန်ခဲ့တဲ့ ၄၇နှစ်မှာတုန်းက ဒီနေ့လို ၈ရက်နေ့ မနက်မှာမှ ယူနီယံကြီး အဖြိုချခံရ.. ကျောင်းသား ကျောင်းသူ တွေကို ပစ်သတ်.. ဖမ်းဆီးတာတွေ အပြင်းထန်ဆုံး လုပ်ခဲ့တာပါ။ ဗိုလ်ချုပ် တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ တပ်မတော်ကို ကျောင်းသားတွေ သိမ်းကျုံးပြီး မုန်းတတ်သွားစေတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေရဲ့ အစပါပဲ။ အဲဒီနေ့မှာ ဘက်နက်ဖျား ကနေ သီသီလေးလွတ်လာခဲ့တဲ့ ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသားလေး ကျမအဖေဟာ အသက်၅၆မှာ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ အထိ စစ်သားကို စစ်တပ်ကို မုန်းသွားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ7July နောက်ပိုင်း တက္ကသိုလ်နယ်ထဲမှာ ရင်ဖွင့်သံ နှိုးဆော်သံ ငိုညည်းသံ ကဗျာတွေ စာတွေနဲ့အတူ သီချင်း တပုဒ်ကလည်း လွင့်ပျံ့ထင်ရှားလာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ သီချင်းလေးကို အဖေ ခဏခဏဆိုပါတယ်။ ခု ဒီဘက် ရောက်လာတော့မှ ဆရာဂျမ်း(ကဗျာဆရာ တင်မိုး)နဲ့ တွေ့ချိန်တွေမှာ ဆရာက အဲဒီသီချင်းကို ဆိုဆိုပြပါတယ်။ ဆရာကပဲ အဲဒီသီချင်းကို ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး မြတ်လေးရေးခဲ့တာလို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီသီချင်းလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
တက္ကသိုလ်.. ဒို့ကျောင်း.. တစ်နေရာ… အုတ်ပုံ အုတ်ပျက် စုလျက် ပုံလျက် နေပြန်တာ.. မြေမှာပြိုလဲ.. မသဲကွဲသော.. ထိုအချင်းအရာ သေချာကြည့်လျှင်.. အဖြေရှာ.. သိနိုင်ရာဇ၀င်.. အခိုင်အမာ.. ကျောက်စာမော်ကွန်း.. ထွန်းလျှက် ပေစာ.. မရှိပါ သော်လည်း.. အသဲအက်နာစရာ..(တရံတခါက တက္ကဝေယံ.. ဘုံပျံမဟာ.. ရှိပါလေငြား.. ကျောင်းသားယူနီယံ.. အိုးဝေကျူးသံနဲ့.. တောင်းဆုပြု.. ညီညီညာညာ မရွှင်နှိင်.. ခွေနွမ်း… လွမ်းစရာ့အခြေပါ.. စစ်မြေထိုတလင်း ကျင်းရက်လေရှာ)၂ သံကြော်ကြွေးလျက်သာ.. ရုံးစုလျှက် ညီညာကြရာ.. အပြစ်ရှာ မိုက်လုံးကြီးတာ.. သေနတ်ကို မောင်းတင်.. နှင်လေရှာ..။
သူငယ်ချင်း... ငါအခု ရန်ကုန်ထောင်မှာ ရောက်နေပြီ။ ငါ- ၀ံပုလွေတွေရဲ့ သားရဲတွင်းမှာ ရက်ပေါင်း(၂၀) တိတိ အညှင်းဆဲ ခံခဲ့ရတယ်။ ကြေးစားဝံပုလွေတွေက သိုးငယ်ကို အပြစ်ရှာသလို ငါ့ကို ၀ိုင်းပြီး စစ်ဆေးကြတယ်။ ငါ့အဖို့ ငရဲဆိုတာ ဒါပဲလို့ ပူပူနွေးနွေး အရှင်လတ်လတ် သိလိုက်ရတာပဲ။ ရက်ပေါင်း(၂၀)အတွင်း နေ့နဲ့ညကို ငါမသိလိုက်ဘူး၊ ငါ့ရှေ့မှာ မီးမောင်းရယ်၊ ယုတ်မာရက်စက်တဲ့ တိရစ္ဆာန်မျက်နှာတွေရယ်တို့သာ ငါမြင်ရတယ်။
ကြမ်းကြုတ်တဲ့၊ မာကျောတဲ့ အကြင်နာတရားကင်းတဲ့ မေးခွန်းတွေဟာ ငါ့နားထဲကို သံရည်ပူ လောင်းသလိုပဲ၊ ဒီရက်အတွင်း ငါအိပ်လည်း မအိပ်ခဲ့ရဘူး။ “မသိဘူး”ဆိုတဲ့ အဖြေကို အကြိမ်ပေါင်း တစ်ထောင်ကျော် အော်ပြော ရင်း ငါ ဗုံးဗုံး လဲကျသွားမှ ငရဲခန်းက လွတ်တော့တယ်။ အခု ရန်ကုန်ထောင်ကျတော့လည်း (စီ)အတန်းမှာ နေရ တယ်။ (ဘီ)အတန်း မရဘူး။ ဒါကြောင့် ပဲပင်ပေါက်ဟင်း၊ ထောင်အခေါ် နိုင်လွန်ဟင်းရယ်၊ ပဲဟင်းရယ်၊ လုံးတီး ရယ်၊ သဲရှပ်ရှပ် ငါးပိစိမ်းစားတွေကိုသာ အာဟာရအဖြစ် မှီဝဲနေရတယ်။ အခုရာသီမှာတော့ ဂုံနီအိတ်ဟာ ငါ့အတွက် ခြုံစောင်ပဲ။ ဒါပေမဲ့ ငါ့စိတ်ကတော့ လွတ်လပ်လျက်ပဲ၊ ငါ့ စိတ်ဓာတ်ကိုတော့ ဘယ်သူကမှ အာဏာ မသိမ်းနိုင်ဘူး။
88 တုန်းက အဲဒိစာအုပ် ကဗျာဆရာ မောင်ကြည်မွန်
ယူလာလို့ဖတ်ဖူးတယ်။ နောက်တော့ မောင်ညိုအေး (ပန်းတော)ဌားသွားပြီး သူထောင်ကျတော့ သူအိမ်က
စာအုပ်တွေ မီးရှို့ တဲ့အထဲပါသွားတာ။ အဲ့ဒိထဲက ကျန်တဲ့
မကြီးရေ ဖတ်လိုက်တိုင်း ရင်ထဲမှာ ခံစားရပါတယ်ဗျာ မမီပေမဲ့ အသိစိတ်မှာ စွဲထင်စေပါတယ်။ ဘယ်လိုမှ မေ့မရတဲ့ အာဇာနည်ကျောင်းသားတွေရဲ့ ပြယုဒ် တခုပါပဲ
ဇူလိုင် ၇ ရက် ၁၉၆၂ နေ့ ဟာ ဗမာပြည်ရဲ့ ပညာရေးနဲ့ဗမာလူမျိုးတို့ ရဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေကို စတင်ဖျက်ဆီးမဲ့နေ့ လို့ မြင်မိပါတယ်။ ပညာတတ်တွေကို ခေတ်အဆက်ဆက် သုတ်သင်မှုကြောင့် အခုဆိုရင် ဗမာပြည်မှာ ပညာရေးသာမက စိတ်ဓါတ်တွေပါ ပျက်စီးကုန်ပါပြီ ဆရာမရယ်။
သမိုင်းတွေကို သေချာစုစောင်းတင်ပြပေးတဲ့ ဆရာမကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
I love Burma(Myanmar) and Burmese food. Wish you all the best.
မာယာ: ဒီသီချင်းကို ပြန်ဆိုထားတာ ဆရာဂျမ်းကို ကျနော်ဖွင့်ပြလိုက်တာပါ။
16 Jul 09, 02:13
မာယာ: ရင်ပြင်နီခင်ဆွေက မဆလပါတီထဲ ရောက်သွားတယ်လို့ ဦးတင်မိုးက ပြောပါတယ်။
16 Jul 09, 02:07
မာယာ: ပြန်ထုတ်ပါတယ်။ သီချင်းခွေနာမည်က "သမဂ္ဂကြယ်နီ" ဖြစ်ပါတယ်
16 Jul 09, 02:06
မာယာ: ဒေါ်မေငြိမ်း သီချင်းနာမည်က ယူနီယံအဆောက်အဦးတနေရာ လို့ မှတ်မိပါတယ်။ ရေးသူက ရင်ပြင်နီ ခင်ဆွေပါ။ ဒီသီချင်းကို ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချု့ပ် (အထက်ဗမာနိုင်ငံ) က ၈ လေးလုံးကာလမှာ